COVID-19 မကူးစက်အောင် အိမ်မှာနေဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် | Duwun
နောက်ထပ် အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ နောက်ထပ် အနုပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီး ပရိသတ်တွေကို COVID-19 မကူးစက်အောင် အိမ်မှာပဲ နေဖို့ အခုလို တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။
အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ သူ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ မကူးစက်နိုင်အောင် အိမ်အပြင်ကို မထွက်ကြဖို့ အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ သူနဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး၊ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး၊ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသု တို့လည်း ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
"ကိုယ်တွေတာဝန်ကတော့ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေဆီကျန်းမာရေးအသိပေးချက်တွေ ရောက်ရှိဖို့၊ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာနိုင်ဖို့ပါ။ တတ်နိုင်သမျှအိမ်မှာနေလိုက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံမရပ်သွားဖို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အလုပ်သွားပေးနေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို ကူညီရာရောက်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် မဖြစ်မနေဆက်လုပ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ( ဥပမာ ဆေးရုံ / ရဲဌာန / ဘဏ်လုပ်ငန်း စသဖြင့် အများကြီးပါ ) တတ်နိုင်သူတွေ အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် ကူညီပါခင်ဗျာ။ အားလုံးကျန်းမာပါစေ" ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁ နာရီကျော်က စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့ လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီးတွေမှာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က Mask တွေ လှူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
"3 လွှာ Surgical Mask များကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အခုရေ 10000 ￼လှိုင်သာယာဆေးရုံကြီးသို့ အခုရေ 10000 သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ Fighting Doctors and Nurses !! Please be safe for us !! We need you !! " ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Facebook Page မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့ လူဦးရေတွေက အများကြီးရှိလို့နေပါပြီ။နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးသွားတွေကိုလည်း ဝင်ခွင့်၊ ထွက်ခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ လူစုလူဝေးအများအပြားနဲ့ ပြုလုပ်ရတဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲ၊ သင်္ကြန်ပွဲတွေ လုပ်ခွင့်မရတော့သလို ရုပ်ရှင်ရုံတွေလည်း ယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာရှင် တော်တော်များ များကလည်း အဆိုပါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြဖို့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက တိုက်တွန်းနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။